Mbola eo ampelatanan’ny manampahefana Iraniana ny ain’ny mpifindra monina Afghana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jolay 2020 5:13 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, Español, Ελληνικά, русский, Français, polski, English
Raha mbola manohy ny fihetsiketsehany izao tontolo izao manoloana ny fahafatesan'i George Floyd tany Etazonia sy ny fanamelohana ny fanavakavaham-bolonkoditra sy ny fanavakavahana dia mitolona manokana amin'ny olana mitovy amin'izany ireo Afghana izay ahitana ny fomba ampijaliana ireo mpifindra monina Afghana ao Iran rehefa niezaka ny ho tonga any Eoropa amin'ny alàlan'izany firenena izany izy ireo.
Ny fitifirana fiaran'olon-tsotra nitondra mpifindra monina miisa 13 tao amin'ny faritany Yazd ao afovoan'i Iran nataon'ny polisy Iraniana tamin'ny volana Mey no tranga vao haingana nahitana ny habibiana maro niainan'ireo mpifindra monina Afghana. May tao anaty fiara ny mpifindra monina miisa telo ary naratra mafy ny efatra vokatry ny tifitra. Niparitaka tao amin'ny tambajotra sosialy ny sarin'ny fiara nirehitra ka niteraka hatezerana. Araka ny nosoratan'ny mpisera Twitter Afghan iray:
Nitatitra ny Reuters News Agency fa:
Hoy i Khaled Hosseini, mpanoratra Afghana fanta-daza manerantany, mpanoratra ilay boky malaza “The Kite Runner”, tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook:
Tompon'andraikitra Iraniana maro no nanararaotra ny fahafatesan'i George Floyd mba ho fitaovana fampielezankevitra hamelezana an'i Etazonia, nefa izy ireo ihany koa aza dia tsy mahavita mamaha ny olana amin'ny fampijaliana tsy mitsahatra ny mpitsoa-ponenana Afghana any Iran, araka ny voalazan'ilay mpanao hatsikana Afghana Musa Zafar tao amin'ny siokany:
Taorian'ny fitarainana tao Afghanistan dia nitsidika ny hopitaly tao Iran ny ambasadaoro tao Afghanistan any Iran izay nitsaboina ireo mpifindra monina Afghana afaka nivoaka ny fiara may. Niarahaba ilay lehilahy izay nofatorana rojovy teo am-pandrianan'ny hopitaly ny ambasadaoro.
Talohan'ity tranganà fiara nirehitra ity, Afghana miisa 50 mahery no nosamborina raha niampita ny sisintany andrefan'i Afghanistan nankany Iran tamin'ny volana Mey 2020. Nampijaly azy ireo ny polisin'ny sisintany Iraniana ary nanery azy ireo hitsambikina any anaty renirano izay miala ao Afghanistan mankany Iran. Efa ho 23 tamin'izy ireo no maty an-drano, 15 no tsy hita ary 21 monja tamin'izy ireo no sisa velona.
Nanda ny fampijaliana sy ny mpifindra monina Afghana maty an-drano noho ny nataon'ny polisin'ny sisintany i Iran. Saingy mila fanadihadiana ny fitokisana ny manampahefana Iraniana: tamin'ny volana Janoary 2020, notifirin'ny mpiambina revolisionera tao Iran nandritra ny fifandirana tamin'ny Etazonia tany amin'ny faritra ny fiaramanidina nitondra mpandeha. Nolavin'i Iran tamin'ny voalohany ny fampiasany balafomanga nikendrena ilay fiaramanidina izay nahafatesana olona miisa 176 teny an'habakabaka, saingy niaiky izany izy ireo tamin'ny farany.
Nanamafy ny fanadihadiana nataon'ny Vaomiera Mahaleotena Mpiaro ny Zon'olombelona any Afghanistan fa nampijaly sy namono mpifindra monina tany amin'ny sisintany ny polisin'ny sisintany Iraniana.
Tamin'ny 14 Mey, nanangana vaomiera hanadihady momba ireo mpifindra monina Afghana maty an-drano ny governemanta Afghana sy ny governemanta Iraniana. Tsy mbola namoaka ny valin'ny fanadihadiana ny vaomiera na dia mbola nolavin'i Iran aza izay mety ho fahadisoana nataony.
Raha an-tapitrisany maro ny Afghana nialokaloka any Iran hatramin'ny nipoahan'ny ady tamin'ny taompolo 1980 dia nampijalian'ny manampahefana Iraniana ihany koa izy ireo, araka ny asehon'ireo tranga mampalahelo vao haingana. Tsy misitraka ny fampianarana sy ny filàna fototra ireo Afghana izay matetika miasa toy ny mpiasa mitady ny hohaniny isan'andro.
Nandà tsy hitsabo ireo mpifindra monina Afghana miasa any Iran ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana Iraniana rehefa namely an'i Iran ny COVID-19 tamin'ny volana Febroary 2020. Vokatr'izany, mpifindra monina an'hetsiny no tsy maintsy nangorona ny entany ary niverina tany Afghanistan ka namindra aretina tany amin'ny tanindrazany izay efa marefo ny rafitra ara-pahasalamana mba hiadiana amin'ny areti-mandringana.